Saddex ka Mid ah Ciidamada Ethiopia oo Lagu Dhaawacay Bali-dhiig – Rasaasa News
Nov 8, 2011 Saddex ka Mid ah Ciidamada Ethiopia oo Lagu Dhaawacay Bali-dhiig
Nairobi, November 8, 2011 [ras] – Ciidamada Ethiopia oo ku raad jooga dambiilayaal dilal ka gaystay tuulooyin ka tirsan Ethiopia oo xiga dhinaca xadka Somaliya, ayaa waxaa weerar ku qaaday ciidamada maamulka Somaliland. Waxayna dhaawacyo gaadhsiiyeen saddex askari oo ka tirsan ciidanka Ethiopia.
Ciidamada Ethiopia oo loo sheegay in ay ku dhuumanayaan tuulada Bali-dhiig shan oo ka mid ah dambiilayaal dhawaan waxayeelo ka gastay tuulooyin hoostaga tuulada Yoocaale, ee gabalka Jarar.
Taliyeyaasha ciidanka oo kala xaajoonaya oday dhaqameedyada Tuulada Bali-dhiig in ay soo celiyo dambiilayaasha, si maxkamad loo hor geeyo, oo ay odayduna diidan yihiin, ayaa waxaa ciidamada weerar ku qaaday maleeshiyo hubaysan.
Ciidanka ayaa caydhiyey maleeshiyadii, waxayna dambceen in ay wali waanwaan la wadaan oday dhaqameedyada. Nasiib daro labo saacadood ka dib waxaa ciidamada Ethiopia weerar gaadmo ah ku qaaday ciidamada maamulka Somaliland oo gurmad goobta ku yimid. Waxayna dhaawaceen saddex ka mid ah ciidamada dawlada Ethiopia ee loo yaqaan bilayska cusub.
Ciidanka Ethiopia oo saarnaa laba gaadhi oo Toyota ah ayaa kolkii dambe dib uga soo baxay Tuulada, iyaga oo wata dhaawacoodii.
Ciidamada Somaliland ayaa waxay wadaan sansaan colaadeed, waxayn isku dayayaan in ay ka soo talaabaan xadka u dhaxeeya Ethiopia iyo Somaliya, halkaas oo ay degan yihiin dad Somali ah.
Maamulka Somaliland ayaan aqoonsanayn xadka u dhaxeeya dhinaca maamulkooda iyo Ethiopia, maadaama ay dhinaca xadka degan yihiin dad beel ahaan ku raacsan maamulka Somaliland.
Hore ayey heshiis ku saabsan xuduud u dhexmaray maamulka somaliland iyo Ethiopia loogu kala sixiixda magaalada Dire Dawa. Waxaana uu heshiisku ahaa in dambiileyaasha labada dhinac la isu soo celiyo, si loo xakameeya nabad diidka iyo qaswadayaasha ka faa,iidaysta xuduuda.
Talaabadan uu qaaday maamulka Somaliland ayaa waxay horseedi kartaa in ciidamada Ethiopia ay galaan gudaha maamulka Somaliland oo aan awood u lahayn ilaalin xadka.
Ethiopia waxaa ka hasyta xadka u dhaxeeya maamulka Somaliland fadqalalo la xidhiidha nabad diidka iyo waliba kontarabaan sharci darada ah, dalka soo gala maalin walba dhibaatana ku haya dhaqaalaha Ethiopia.
Harag Sagaaro Iiga Kac Mooyee Iiga Durug ma Leh